06.02.2019 13.05.2021 admin Travel
Boggan ka akhriso cutubka 4-aad ee dastuurka qabyo-qoraalka. Haddi Golaha Guurtidu oggolaan waayo, ama wax-ka-beddelid uu soo jeediyay Golaha Wakiiladu ku qanci waayo, Golaha Wakiiladu wuxuu xaq u leeyahay in mashruuca-sharciga kalfadhiga xiga ee Golaha Guurtida dib ugu celiyo. Waxa ay ay u baahanyihiin cid u dammaanad qaadda xasillooni iyo s ay ku noolaadaan. Samaynta khamriga iyo beerista ama ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyuhu geyiga Somaaliland way ka reebban yihiin. Madaxwaynuhu wuxuu xilkiisa u fulin doonaa si waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degsan. Email ou telefone Senha Esqueceu a conta?
Author: Mokazahn JoJok
Boggan ka akhriso cutubka 4-aad ee dastuurka qabyo-qoraalka. Madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 45 cisho oo isku xiga muddo ka badan sabab caafimaad mooyaane. Waxay xuduud la leedahay gobbollada Bari, sanaag-bari, Sool iyo Nugaal. Uma bannaana qof shaqaale Dawladdeed ah inuu isu taago doorasho haddaanu muddada xeerku cayimay ka hor shaqo ka tegid codsan taas oo in laga dastuhrka ay waajib tahay.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Waxa ay u baahanyihiin cid ka hortagta falalka waxashnimada ah ee maalin walba haldoorka Soomaaliyeed lagu gummaadayo. Maamuulka Gobollada iyo Degmooyinka. Waa inuu xaaskiisu yahay Muslim. Wax-ka-beddelka iyo Kaabidda Dastuurka.
Inuu yahay xil-kas; akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisuna toosan yihiin. Hadiyadaha la siiyo Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha iyo Marwooyinkooda iyo Madaxda sare ee Qaranka ee Ieh muuqaal Qaran iyada oo lagu maamuusayo xilka ay hayaan waxa weeye hanti Qaran.
Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1. Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada. Waxaa ka reebban xukunkaas faqradda laad wixii cay ama aflagaado ah ee xubintu geysato. Hantida gaar pnetland ee lagu helay si xeerka waafaqsan, lalama wareegi karo dan guud awgeed mooyaane, iyadoo markaana Ia bixinayo cawil-celin munaasib ah.
Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Sawirada idin muuqda waa Wasaaradda Maaliyadda ee Puntland oo leh muuqaal qurux badan, shaqaale iyo nidaam maaliyadeed oo penland.
Those who work with me have heard me say, time and again: Email or Phone Password Forgotten account? Haddii qabashada aftidu suuroobi waydo muddada loo xaddiday, waxa muddada ku meel gaadh ahaan loogu dhaqmayo Dastuurka kolba kordhin kara Baarlamaanka Guurtida iyo Wakiilada.
Waxa malinti arbacad safarka ubaxay xubno katirsan ururka uu hogaminayo gudomiyaha ururka MOHA abdi- khaliq waxayna kaqabten hawlo badan mudadi 3bari ay kusugnayen deganka waxana ka xusi gadhnaa ; 1. Waxaa urur waynaha iftiin ay safar shqo iyo u kuur gal Ku tageen deeganka xiddasafarkaasoo qaatay mudo shan beri ahkaa soo uu ururka geeyaya deegaanka 15 xabo oo baalaha cad- cadeeda Ku shqeeya ee solarka Pentlxnd uu ahaa wajigii saddexad ee xirida solarada magalada xidda Wajigii kowaad waxa no hirgalay 3xabo Maxamadaha Racfaanka ee Gobolladda; 3.
Xarunta Golaha Wakiiladu waa Magaalo-madaxda. Haddii Golahu ka aqbalo istiqaalad. Wajigii labadna waxa no hirgalay 9xabo Wajigii saddexadna waxa hirgaly 15 xabo Waxa nogu so dhamaty si guulaya Sidoo kale dastuurla wuxuu usoo kuur galay xaaladaha guud ee deegaankawaxaa sidoo kale farxad u ah ururka in ay bulshada deegaankau riyaaqeen hawshaa baaxadda leh ee uu ururku wado iyagoo uga mahadceliyay hawshooda iyo dhabar- adaygoodaqaybo badan oo bulshada ka mid ah ayuu ururka kala kulmay casuumado halkaas oo si fiican laisugu waraystay Iftiin shaqadiisu waa mid Ku socoto qorshe iyo qaab qaatana wakhti.
Doodaha ku saabsan aafooyinka dabuciga ah; kh- Doodaha Ia xidhiidha xeerarka deg-degga ah; d. Eebbaha ummadda Somaliland ku beeray geyigani waxa uu ugu deeqay awood iyo karaamo Qaranimo.
Tirada garsoorayaashu waa inaanay ka yaraan Guddoomiyaha iyo afar garsoore; waxaana nidaaminaya xeer gaar ah. Waxa Madaxweyne ama Ku-xigeen Madaxweyne loo dooran karaa qofka buuxiya shuruudaha soo socda: Khudbada Raisalwasaraha oo Qoraal ah.
Maxamadaha ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda waxa nidaaminaya xeer gaar ah. Doorashada Xubinta Golaha iyo Muddada Xilka.
Haddii mid ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Madaxweynaha saddexda sano ee u horreeya shanta sano ee xilka loo doortay, waxa Madaxweyne Ku-xigeenku noqonayaa Madaxweyne ku meel gaadh ah, waxaana Madaxweyne lagu dooranayaa muddo lix bilood gudohood ah. Waa inuu Muslim yahay, kuna dhaqmaa Pentlane lslaamka.
Ururwaynaha iftiin organization dhamaantood waxy tacsi tiiranyo leh Inay sameeyaan cilmi-baadhis nooc kasta ha ahaadee dastiurka ka eegaya dhinaca Diinta, gaar ahaan horumarka cilmiga sayniska iyo Diinta.
Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Marka ay soo if-baxaan xaalado gaar ah oo halis gelin kara nabadgelyada dalka; khatar ku noqon kara xeerka iyo nidaamka; khalkhal ku abuuri kara xasilloonida guud, ama kalsoonida dhaqaale, waxa Madaxweynuhu soo saarayaa xeerar deg-deg ah oo lagu joojinayo khataraha kor ku sheegan.
Said dani waa danayste aan mudnayn in la doorto ee ay tahay in qori dheer la isaga qabto. Labada Gole ee Baarlamanku waxay yeelanayaan fadhiyo ay wadaagaan iyo kuwo gaar u kala ah. Tagida barnamujki solarka wajikisii labad tiradisu tahay 9 xabo waxayna katagen sharacyada magaaladda xidda 2.
Boggan ka akhriso cutubka 4-aad ee dastuurka qabyo-qoraalka. Golaha Wakiiladu waa xubno ka wakil ah dadweynaha; waana Qaybta laad ee Xeer-dejinta dalka, ansixinta xeerarka, oggolaanshaha iyo dasfuurka siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka. Waxa xubintu muddada dastuuriga ah hayn doontaa xilka bo magacaabay; isla markaana waayi doontaa xubinnimadii Golaha Wakiilada. Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo horjeeddaa falalka argagaxis-nimada iwm, ujeeddo kasta ha lahaadeene. Diinta Qaranka Somaliland waa Diinta lslaamka; waxaana geyiga Somaliland ka reebban faafinta diin aan ahayn Diinta lslaamka. Magacyada Guddiga Isku-duba-ridka Dastuurka: Waxa ay u baahanyihiin cid la xisaabtanta dadka u qaabbilsan arrimaha amniga. Agaasimaha xarunta PDRC cksub labada dhinac ee shirku quseeyo ku booriyey inay aragti mideysan dastuurla yeeshaan xilliga kala-guurka siyaasadeed ee foodda nagu soo haya.
Boggan ka akhriso cutubka 4-aad ee dastuurka qabyo-qoraalka. Haddii uu xukun ciqaabeed oo kama damays ahi ku dhaco. In uu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa Golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdegga ah iyada oo la raacayo Dastuurka. Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman; Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kama badnaan karaan saddex 3 xisbi.
Tusmada Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Qaybta laad. Xubinta laad. Tilmaanta Guud. Xubinta 2aad.
APOSTILA DE CALDEIRARIA EM PDF